လက်ကား KD-BC-8L စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းချသော အရည်အသွေးမြင့် တာရှည်ခံ 17.3-လက်မ အိတ်ဆောင် ဒါရိုက်တာနှင့် အသံဖမ်း ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ထုတ်လုပ်သူ |ကြင်နာသောကွန်ရက်
Alibaba တွင် KD-BC-8L ကိုမှာယူရန် နှိပ်ပါ။
မှပံ့ပိုးသည် အဝင်-AC110v-240v၊50-60Hz၊5A၊အထွက်-12v 10a
ဗီဒီယိုထည့်သွင်းခြင်း။ 3G-SDI×8၊ HDMI×2
ဗီဒီယိုအထွက် PGM အထွက် HDMI × 1၊ SDI × 1; PVW အထွက် HDMI × 1၊ SDI × 1; စနစ်များ ပြသမှု HDMI × 1
အသံထည့်သွင်းခြင်း။ RCA×5၊MIC XLR×5 တွင် စတီရီယို (L,R)
အသံအထွက် စတီရီယို (L၊R) ထွက် RCA×1၊ Balanced XLR Out×2၊Monitorф3.5×1၊Playback Monitorф3.5×1၊ဒါရိုက်တာက Micф3.5×2 ဟုခေါ်သည်
အခြားသော မျက်နှာပြင်များ USB2.0×2၊RJ451000m×1
ဒါရိုက်တာသတင်းလွှာ Tally Mini XLR Out×8၊ ဒါရိုက်တာခေါ်ဆိုမှုများ
ဗီဒီယိုပြောင်းခြင်း။ ဟာ့ဒ်ဝဲပြောင်းခြင်း အချက်ပြ× ၈
Mixer ပါ။ Digital Mixer ×5၊Analog Mixer×5၊Audio Hardware Delay Device ×2
1. ☆ဗီဒီယိုထည့်သွင်းမှု- 3G/HD-SDI ထည့်သွင်းမှု 8 ဖွဲ့၊ HDMI ထည့်သွင်းမှု2အုပ်စု၊ 1080i50Hz ပံ့ပိုးမှု၊ နှင့် အခြားအချက်ပြထည့်သွင်းမှု။Built-in HD စာတန်းထိုးစက် ထည့်သွင်းသည့် မျက်နှာပြင်၊ အင်တာဖေ့စ်သည် HDMI သို့မဟုတ် SDI ဖြစ်သည်။အထွက်- PVW အထွက်အုပ်စု 1 အုပ်စုနှင့် PGM အထွက်အုပ်စု 1 အပါအဝင်၊
2. ☆ အသံထည့်သွင်းခြင်း- XLR ဟန်ချက်ညီသော အသံထည့်သွင်းမှုများ၊ LINE နှင့် MIC မုဒ်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် အုပ်စု5ခု၊ တစ်ခုစီတွင် 48v ဖန်တမ်ပါဝါခလုတ်၊ RCA (R, L) စတီရီယိုထည့်သွင်းမှု5အုပ်စု၊ SDI အုပ်စု5ခု၊ HDMI ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံပေါင်း ထည့်သွင်းမှုအား ဖယ်ရှားခြင်းအထွက်- XLR ဟန်ချက်ညီသော အသံအထွက်အုပ်စု2ခု၊ RCA (R, L) စတီရီယိုအထွက်အုပ်စု 1 ခု၊ 3.5mm အသံမော်နီတာ အထွက်၊
3. ☆ ဟာ့ဒ်ဝဲ အထူးအကျိုးသက်ရောက်မှုများ ကွန်ဆိုး- ရှစ်လိုင်း ဟာ့ဒ်ဝဲ မြင့်မားသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ရောစပ်ထားသော အထူးပြုလုပ်ချက် ကွန်ဆိုး၊ တပ်ဆင်ထားသော ဖရိန်ချိန်ကိုက်မှု ၊ 4:4:4 ဖိသိပ်မထားသော ဖရိန်အပြည့်ကို သုည ဒုတိယ ခက်ခဲစွာဖြတ်တောက်ခြင်း သတိပြုမိသည်၊ အထူးအကျိုးသက်ရောက်မှုများ switcher သည် T-shaped damping အကူးအပြောင်း ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို ပံ့ပိုးပေးသည် ထို့အပြင် ၎င်းသည် 1920 × 1080 ကြည်လင်ပြတ်သားမှုဖြင့် သော့ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် အလိုအလျောက်ပြောင်းခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပြီး အထူးအထူးပြုလုပ်ချက် ရာပေါင်းများစွာကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားသော ပုံတူများ၊ အဝင်နှင့်အထွက် ဖျော့ဖျော့နှင့် ရုပ်ပုံတစ်ပုံချင်း စသည်တို့ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ရုပ်ပုံ-ပုံ-ပုံ အနေအထား ထိန်းချုပ်မှု၊
4. ☆ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းစနစ်- 10-မျက်နှာပြင် မြင့်မားသော-အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ကွဲထွက်မှုနှင့်အတူ၊ အသီးသီးထည့်သွင်းထားသော အချက်ပြမှု ၈ ခုနှင့် အထွက်အချက်ပြမှု ၂ ခုတို့ကို အသီးသီးပြသပေးသည်။
5. ☆အတွင်းပိုင်းခေါ်ဆိုမှုစနစ်- Built-in 8-channel ဟာ့ဒ်ဝဲလမ်းညွှန်ခေါ်ဆိုမှုစနစ်နှင့် 8-ချန်နယ်လမ်းညွှန်ချက်စနစ် TALLY ပါဝင်ပြီး တစ်ဦးချင်းခေါ်ဆိုမှုများ၊ ခေါ်ဆိုမှုများအားလုံးကို နားလည်သိရှိနိုင်စေရန် ချန်နယ်တစ်ခုစီအတွက် ခေါ်ဆိုမှုရွေးချယ်မှုခလုတ် 8 ခုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
6. ☆Audio processing- built-in digital mixer၊ analog mixer နှင့် audio delayer၊ audio embedding နှင့် de-embedding၊ digital audio နှင့် analog audio တို့ကို ရောစပ်ထားသည်ကို သိရှိနားလည်လာစေရန်၊ SDI5စုံ၊ HDMI digital plus de-embedding audio,5Set XLR ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိုက်ခရိုဖုန်းများ သို့မဟုတ် ဟန်ချက်ညီသောအသံ၊ 48V ဖန်တမ်ပါဝါ5စုံနှင့် RCA (R, L) စတီရီယိုအော်ဒီယိုဟာ့ဒ်ဝဲရောစပ်ကွန်ဆိုးလ်5စုံ၊ အသံချဲ့စက်နှင့် အသံပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုပါရှိသော ရောစပ်စက်၊ အသံအတိုးအကျယ်ချိန်ညှိမှု faders7အစုံပါသော Volume ကို သီးခြားထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံ၊ analog အသံနှင့် ပင်မအထွက်အသံ၊ XLR ဟန်ချက်ညီသော အထွက်2အစုံ၊ RCA (R, L) စတီရီယိုအထွက် 1 အစုံ၊ HDMI ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံ မြှုပ်သွင်းထားသော အထွက်2အစုံနှင့် SDI ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံ မြှုပ်သွင်းထားသော အထွက်2အစုံ၊ တပ်ဆင်- အော်ဒီယို ဟာ့ဒ်ဝဲ နှောင့်နှေးမှု စနစ်တွင် အသံအမြန်နှုန်းကို ချိန်ညှိရန် ဟာ့ဒ်ဝဲခလုတ်မှတဆင့်၊
7. ကင်မရာ PTZ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်- ကင်မရာတစ်ခုစီ၏ တွန်းခြင်း၊ ဆွဲခြင်း၊ စောင်းခြင်းနှင့် zoom တို့ကို အသီးသီးထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ဖြတ်လမ်းခလုတ်များ ကြိုတင်သတ်မှတ်ခလုတ် ၉ ဖွဲ့နှင့် ကြိုတင်သတ်မှတ်အနေအထား ဆက်တင်ခလုတ်များ အုပ်စု ၂ ဖွဲ့၊ ကင်မရာအနေအထားတစ်ခုစီတွင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည် ကြိုတင်သတ်မှတ်မှုများ 100 ကြိုတင်သတ်မှတ်မှုများသည် ကင်မရာလိပ်စာကိုရွေးချယ်ရန် ဟာ့ဒ်ဝဲ ရိုတာရီကုဒ်ဒါထိန်းချုပ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ ကင်မရာလက်စွဲနှင့် အလိုအလျောက်တိကျသောထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ ကင်မရာ၏အဖြူရောင်ချိန်ခွင်လျှာ၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ အလင်းဝင်ပေါက်၊ အရောင်၊ အလင်းအမှောင်စသည်တို့ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည် ;
8. ☆Recording စနစ်- အဆက်မပြတ်ဘောင်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ကုဒ်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းကို ရရှိရန်အတွက် Built-in 4:2:0 ကုဒ်ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းစနစ်။ဟာ့ဒ်ဝဲအသံဖမ်းစနစ်သည် Micro SD/TF ကတ်၊ USB နှင့် အခြားသိုလှောင်မှုကြားခံများကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး TF ကတ်၊ U ဒစ်နှင့် မိုဘိုင်းလ်ဟာ့ဒ်ဒစ် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အသံဖမ်းခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ဖိုင်ဖော်မတ်သည် MP4 ဖြစ်ပြီး၊ လိုင်းမဟုတ်သော တည်းဖြတ်စနစ်သို့ တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
9. Built-in Wifi- WLAN ပင်မသတ်မှတ်ချက်များ၊ PHY- 2.4 band နှင့် 5G band 2x2 ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။MAC- IEEE 802.11 d/e/h/i/k/w ပံ့ပိုးမှု။20M/40M/80M အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။IEEE 802.11 b/ g/n/ac ပံ့ပိုးမှု။ပို့လွှတ်စွမ်းအား: 11b@16dBm;11g@14dBm;11n@13dBm;MCS9@13dBm;2.4G လက်ခံရရှိမှု အာရုံခံနိုင်စွမ်း (40MHz): -80dBm@Rate MCS 0;-68dBm@Rate MCS 5;-64dBm@ MCS7၊ 5G လက်ခံအာရုံခံနိုင်စွမ်း (40MHz): -80dBm@Rate MCS 0;-68dBm@Rate MCS 5;-64dBm@MCS7;
10. Built-in အသံနှင့် ဗီဒီယို ကုဒ်ဝှက်စနစ်- ဗီဒီယိုကုဒ်နံပါတ် H.264၊ အော်ဒီယိုကုဒ်ကုဒ် AAC၊ ကုဒ်သွင်းခြင်းနှောင့်နှေးမှု ≤67ms၊ ဗီဒီယိုကုဒ်နံပါတ် 256Kbps ~ 25Mbps ချိန်ညှိနိုင်သော၊ အသံကုဒ်သွင်းမှုနှုန်း 32Kbps ~ 512Kbps၊ AAC ကုဒ်နံပါတ် 64Kbps၊
11. တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုနှင့် ထုတ်လွှင့်မှု ပရိုတိုကော- FMS တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုနှင့် ထုတ်လွှင့်မှုကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ RTMP တွန်းအားပေးခြင်းနှင့် RTMP ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ APP တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုဆက်တင်စနစ် ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်းလိပ်စာ၊ တွန်းနှုန်းနှင့် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုစသည်တို့ကို အဝေးမှသတ်မှတ်နိုင်သည်။
12. ☆ ထုတ်လွှင့်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု- စံ 3G/HD-SDI ထည့်သွင်းမှု၊ အင်တာဖေ့စ် BNC အမျိုးအစား၊ ပါဝါထောက်ပံ့မှုနှင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှုကာကွယ်မှုပါရှိသော BNC မျက်နှာပြင်၊ ကင်မရာထိန်းချုပ်မှုပေါင်းစပ်စက်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ၊ အချက်ပြငါးချက်ကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် ထုတ်လွှင့်ရန် 75Ω coaxial ကေဘယ်ကြိုးကို နားလည်သဘောပေါက်ပါ၊ ၎င်းတို့၊ များမှာ- ကင်မရာ full HD 3G/HD-SDI ဗီဒီယိုအချက်ပြမှု + ကင်မရာနှင့် XLR အသံအချက်ပြ + ကင်မရာပါဝါထောက်ပံ့မှု + ကင်မရာ PTZ ထိန်းချုပ်မှု + လမ်းညွှန်အချက်ပြ TALLY၊ ကေဘယ်တစ်ခုကသာ ကင်မရာ၏ အချက်ပြမှုအားလုံးကို ပြီးမြောက်စေနိုင်သည်၊ လမ်းညွှန်လက်ခံသူ၊ ထိန်းချုပ်မှုအားလုံး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှု ပို့လွှတ်ခြင်းတို့သည် မိုဘိုင်းရိုက်ကူးခြင်းဆိုင်ရာ ဝိုင်ယာကြိုးပြဿနာကို အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိ ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါသည်။
13. Built-in အလိုအလျောက် ဒါရိုက်တာ ထိန်းချုပ်မှု ယူနစ်၊ ဗီဒီယို အလိုအလျောက် အသိဉာဏ်ရှိသော ဒါရိုက်တာ ထိန်းချုပ်မှု၊ တစ်ပိုင်း အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်မှု၊ လက်စွဲ ထိန်းချုပ်မှု၊ အသုံးပြုသူများအတွက် လွတ်လပ်စွာ ပြောင်းသုံးရန် မုဒ်သုံးခု၊ မှတ်တမ်းခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ရုံဖြင့် သင်သည် မည်သည့်စွက်ဖက်မှုမှ မရှိဘဲ အသံဖမ်းခြင်းနှင့် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အလယ်တွင် ;
14. အခင်းအကျင်းပြောင်းခြင်းဗျူဟာ- ဆရာအနီးကပ်၊ ဆရာမြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်း၊ ကျောင်းသားအနီးကပ်၊ ကျောင်းသားမြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်း၊ ကျောက်သင်ပုန်းအနီးကပ်နှင့် ကွန်ပျူတာစခရင်ကို သင်ကြားပြသပေးသည့် အသိဉာဏ်ပြောင်းခြင်းနှင့် လက်စွဲခလုတ်များအကြား အလိုအလျောက်ပြောင်းကာ မတူညီသော ကူးပြောင်းမှုဗျူဟာများကို သတ်မှတ်နိုင်သည် လိုအပ်ချက်များ (စမတ်ကင်မရာဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်)
ယခင်- KD-BC-8HN စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းချသည့် အရည်အသွေးမြင့် တာရှည်ခံ 17.3-လက်မ အိတ်ဆောင်ဒါရိုက်တာနှင့် အသံဖမ်းစက်
နောက်တစ်ခု: KD-C18B စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း Full Hd 1920*1080 Sdi Full Hd ဗီဒီယို 12x Optical Zoom Livecam